မိုးတွင်းရောက်မှ သန်ချကြမှာလား - YOYARLAY Digital Media and News
တလောက… မိုးမကျခင်လောက်ကပေါ့. …ဆေးခန်းကို လူနာတွေလာတဲ့အခါ သန်ချဖို့ပြောရင် “သန်က အခုချရမှာလား မိုးတွင်းရောက်မှ ချရမှာလား? “ဆိုတာ အတော်များများ မေးကြပါတယ်။
” အခုချရမှာပေါ့….မိုးတွင်းရောက်မှရယ်မဟုတ်ဘူး…သန်က ၆လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ချရမှာ ” လို့ ပြန်ပြန်ရှင်းပြရတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ်လည်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ် … ဘာလို့ လူနာအများစု မိုးတွင်းမှ သန်ချရမယ်ဆိုတဲ့အတွေး ဝင်နေကြသလဲပေါ့။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ အရင်ခေတ်တွေတုန်းက မိုးတွင်းမယ် ယင်နားစာတွေစား …. ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောလည်း အဖြစ်များတော့၊ သန်ထရင်လည်း ဝမ်းသွားတတ်တာနဲ့ .. တစ်ပေါင်းတည်းရောပြီး ဆရာဝန်တွေက သန်ချဆေးတိုက် …. ဒါကိုလူနာတွေက မိုးတွင်းရောက်မှ သန်ချရမယ်လို့ အမှတ်မှားခဲ့ကြပုံ ပေါ်ပါတယ်။
သန်ထခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာ ဝမ်းသွားတာလည်း တစ်ခါအနေနဲ့ ပါနိုင်ပါတယ်။ သန်ထတဲ့အခါဖြစ်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို အကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
– စအိုဝ ယားယံခြင်း
– ဝမ်းထဲမှာ သန်ကောင်များပါလာခြင်း
– အားမရှိ၊ နုံးချိခြင်း
– အစာစားချင်စိတ် ကုန်ခမ်းခြင်း
– ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်း
– ဗိုက်ပူ ဗိုက်ဖောင်းလာတတ်ခြင်း
– ဗိုက်တွေ ထိုးအောင့်ခြင်း
– အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူစဉ် တရွှီရွှီမြည်ခြင်း
– ဗိုက်ထဲ သန်ကောင်တွေ များလာတဲ့အခါမှာတော့ အလွန်တရာမှ အသဲယားစရာကောင်းတဲ့ ပါးစပ်၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ မျက်လုံးများထဲမှ သန်ကောင်တွေ ထွက်လာခြင်းအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သန်ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရွေးမနေဘဲ ၆ လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်သန်ချပါ။ အစာမစားမီနှင့် အစားအစာ မချက်ပြုတ်မီ လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ။ အစားအစာများကို ကျက်အောင် ကြော်ချက်ပြီးမှ စားသုံးပါ။ ခြေဗလာနဲ့ လျှောက်သွားခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီးနေခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူတွေအနေနဲ့လည်း တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထိတွေ့ ဆော့ကစားပြီးတိုင်း လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာဆေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ကဲ…ပြောပြောဆိုဆို ခုလည်း မိုးတွင်းရောက်နေပြီဆိုတော့ကာ … မိုးကျမှ သန်ချမယ်လို့ အားခဲထားသူများ သန်ချဖို့ သတိရလိုက်ပါ။ ၆ လပြည့်တိုင်းလည်း သန်ချဆေးသောက်ဖို့ မမေ့ဖို့ပါ တစ်ပါတည်း မှာလိုက်ပါရစေ။
မေ-ဆေး ၂ (ရိုးရာလေး)
Previous Previous post: မျှစ်တာလပေါ့ဟင်း ချက်စားကြမယ်
Next Next post: မားစ်ဂြိုလ်ရဲ့ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ၁၂.၅ မိုင်ကျယ်တဲ့ ရေကန် တွေ့ရှိ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက Covid-19 ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ အများစုမှာ ရောဂါလက္ခဏာမပြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံကို ဗီဒီယိုထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Photos- ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)၊ Internet,Cherry(ရိုးရာလေး) Post Views: 834
အသက်လေးဆယ်ကျော် နောက်ပိုင်း အရွယ်တင်အောင် နေထိုင်နည်း
သင်သည် အသက်သုံးဆယ် ဝန်းကျင် နှင့် လေးဆယ်နားကပ်နေပြီဆိုလျှင် သင့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင် သိသာသော ပြောင်းလဲမှုများ စတင် ခံစားလာရမည် ဖြစ်သည်။ သင် အိပ်ရာနိုးလာချိန် ရုတ်တရက် မှန်ကြည့်မိသောအခါ သင့်မျက်နှာပေါ်တွင် အရေးအကြောင်း များကို စတင်သတိထားမိ လာရသည်။…
Published: October 24, 201910:29 am